Iindaba-Inkampani yethu ithathe inxaxheba kwi-International International Adhesives and Exhibition Exhibition
Inkampani yethu ithathe inxaxheba kwi-Shanghai International Adhesives and Exhibition Exhibition eyayibanjelwe eShanghai New International Expo Centre ngoSeptemba 16-18, 2020.
Baninzi ababonisi kulo mboniso kwaye ukhuphiswano luyoyikeka. Inkampani yaqesha malunga ne-40 yeemitha zesikwere zeholo yomboniso kwaye yazisa iimveliso ezi-4, oko kukuthi umatshini wokugcwalisa, umatshini wokushicilela, umxube weplanethi, kunye nomatshini wokusasazeka onamandla. Oomatshini bokugcwalisa esikubonisile ngeli xesha bahlukile kobo bezinye iinkampani. Oomatshini bethu bokugcwalisa bahlulwe baba ityhubhu enye kunye neetyhubhu ezimbini. Ukuchaneka kokugcwalisa kuphezulu kwaye kufanelekile kwiglux ye-viscosity eyahlukeneyo. Ezinye iinkampani zisebenzisa ukuzaliswa kwemisila, inkampani yethu iphuhlise itekhnoloji ekhethekileyo yokugcwalisa entloko, izalisa kwindawo yeglue. Oku kuthintela ngokufanelekileyo amaqamza omoya amatsha ngexesha lenkqubo yokuzaliswa. Ubungakanani betyhubhu yomatshini wokugcwalisa ityhubhu kabini inokulungiswa ngokweemfuno zabathengi. Zombini ityhubhu enye kunye neetyhubhu eziphindwe kabini zizaliswe ngokuthe tye, okusombulula ingxaki yokuxuba umoya kunye nokuphuphuma kokugcwaliswa nkqo, kwaye umsebenzi ulunge kakhulu.
Emva kweentsuku ezintathu zomboniso, inkampani yethu ifumene ii-odolo ezili-12 kwaye yafikelela kwiinjongo zokusebenzisana neenkampani ezingaphezu kwama-30. Ukuphucula ukubonakala kwenkampani kumashishini asezantsi naphantsi komzi mveliso, kwaye ubeke isiseko esiluqilima senkqubela phambili yenkampani.
Kwangelo xesha, inkampani yethu ihlala ichitha imali eninzi kuphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso. Lo mboniso ukwomelezile ukuzimisela kwenkampani yethu kuphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso. Kwixesha elizayo, siya kujongana nemarike kwaye sisebenzise itekhnoloji njengesiqinisekiso sokubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngakumbi ngamaxabiso afanelekileyo kunye nokusebenza okufanelekileyo, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abaphezulu nabasezantsi ngezenzo ezifanelekileyo.